स्कूल - iSearch
तपाईं कसरी बच्चाहरूलाई स्कूलमा खोज्न मद्दत गर्नुहुन्छ?
मुख्य प्रश्न अहिले तपाईंको बच्चालाई विद्यालयको दिन कसरी प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। विद्यालयको प्रवेश प्राथमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको मुख्य परिवर्तनको आवश्यकता छ। अन्तमा, उनीहरूले "जीवनको गम्भीरता" जस्तो स्कूलको कुरा गर्दैनन्। तपाईंको बालबालिकासँग अब धेरै अधिक अनुशासन हुनेछ कि बालबालिकामा के थियो। विशेष गरी शुरुआती अवधिको समयमा, यस समायोजन चरणसँग मनोरञ्जन र प्लेटाइमको लागि बढि आवश्यकताको साथ गरिनेछ। निम्न सुझावहरूले तपाईंको बच्चाको लागि संक्रमण सजिलो बनाउन मद्दत गर्न सक्छ:
पूर्ण तालिका छैन
यदि तपाईंको बालबालिकाले पूर्ण मनोरञ्जन कार्यक्रमको लागि सोध्नु भएको छ कि बालबालिकामा बालबालिकालाई अब विपरित हुन सक्छ। शिक्षण, साथसाथै कठोर शिक्षण ढाँचामा आवश्यक एकाग्रता र अनुशासन, मनोरञ्जनको लागि बढि आवश्यकता हुन सक्छ। अवकाश कार्यक्रम सफा राख्नुहोस् र तपाईंको बच्चालाई नि: शुल्क खेल र मनोरञ्जनको लागि थप समय अनुमति दिनुहोस्। तपाईंले शुरुवातमा खेलकुद क्लबहरू वा संगीत सबकहरूको लागि दुई निश्चित हप्ता भन्दा बढी समय तालिकाबद्ध गर्नुपर्दैन।
निरन्तर दैनिक तालिका
तपाईंको बच्चालाई स्कूलको दिनको लागी अनुकूलित गर्न, तपाईंले निश्चित मिति दिनुपर्दछ। गृहकार्यको लागि निरन्तर समय र खेलले तपाईंको बच्चालाई नयाँ दिनचर्यामा अझ सजिलै प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। बच्चाको नाश्ता दिनको पहिलो दिनको लागि व्यवस्थित गरिएको छ।
धेरै आमाबाबुले बालबालिकाको प्रवेश द्वारको साथ आफ्नो कामको घण्टा फेरि सेट अप गरे। तथापि, यदि बालबालिका राम्रो तरिकाले संगठित भए तापनि बालबालिकाले दिनको काम बिग्रेको छ। यसैले यो बीमारी को लागी एक आकस्मिक योजना स्थापित गर्न को लागी उचित छ। यदि कुनै हजुरबुबाहरू छोटो समयमा मदत गर्न उपलब्ध छैनन् भने, अब धेरै शहरहरूमा प्रस्तावित परिवार सेवा मार्फत आपातकालीन हेरविचार हुन सक्छ।
आफैलाई संलग्न गर्नुहोस्!
आमाबाबुका सभाहरूमा सहभागी भएर तपाईंले बच्चाहरू, अभिभावकहरू र शिक्षकहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ, आगामी स्कूल घटनाहरूको बारेमा सूचित गरिनेछ र प्रारम्भिक चरणमा तपाईंको बच्चाको प्रदर्शन र सम्भावित समस्याहरूको बारेमा जानकारी गरिनेछ। बालबालिकाको चासो लिन र उनीहरूलाई बढी प्रभाव पार्न सक्षम हुनका लागि, तपाइँ आमाबाबुको रूपमा संलग्न हुन सक्नुहुन्छ।
दायाँ विद्यालय उपकरण
स्कूल शुरुवातका लागि सही स्कूल उपकरण विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ। उनीहरूले इ-डट्जजान्चेलाई पूर्णतया ठूलो गर्दछन् भन्ने गर्वको साथ मात्र पूरा गर्दैनन्। यसले सिक्नको आनन्द बढाउँछ। न केवल यस कारणको लागि, बच्चालाई आवश्यक रूपमा रेजजन्सको चयनमा समावेश गर्नुपर्छ। यसबाहेक, उपग्रह खरिद गर्दा बच्चाको उपस्थिति पनि यो सुनिश्चित गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ कि यो तपाईंको बालबालिकाको शारीरिक अवस्थामा अनुकूलन अनुकूलन हुन्छ। आकार र वजनको अवस्थामा, अन्य चीजहरू बीच, टाढाको क्षतिबाट टाढा राख्नको लागि खातामा लिन सकिन्छ जुन विभिन्न मोडेलहरू बीचको फरक फरक फरक हुन्छन्। सडकमा बच्चाको राम्रो आवरण दृश्य सुनिश्चित गर्न सीट र लेन्सको आकार पनि महत्त्वपूर्ण छ। जबरजस्ती क्यान्सर उचाईमा क्षैतिज छ जब स्केल आदर्श रूपमा सुरक्षित हुन्छ। Ergonomic फिटको लागि, त्यो पनि शरीरको नजिक हुनुपर्छ। नाजुक बनाइएको बच्चाहरूको लागि, विशेष गरी हल्का र संकीर्ण मोडेलहरू छन्। यद्यपि, निर्माताले कम वजन प्राप्त गर्न स्थिरतामा बचत गर्नु हुँदैन। किताबहरू ब्याकप्याक्सहरू वा विशेष गरी संकीर्ण भण्डारहरूको रक्षा गर्न सामान्यतया प्लास्टिक इनलाइनसँग सुसज्जित छन्। यस्तो अनुप्रयोग पछि पछि थप गर्न सकिन्छ। एक कुरा तपाईलाई विचार गर्नुपर्ने सबै मापदण्डहरू बिर्सनु हुँदैन: चूंकि साथेल अर्को केही वर्षको लागि तपाईंको बच्चाको दैनिक साथी हुनेछ, यो निश्चित रूपमा मोडेल र रङ योजना को छनोटमा समावेश हुनुपर्छ। यद्यपि, धेरै प्यारा र फैशनेबल-निर्भर उद्देश्यबाट बच्नको लागि यो सल्लाह दिइएको छ। आजका लोकप्रिय कार्टुन चरित्रले भविष्यको घोषणा गर्न सकिएन र खराब स्थितिमा चिन्ताको वस्तु बन्न सक्छ।
उपयुक्त स्कूल आपूर्ति किन्नको लागि सहायक सुझावहरू तपाईले हाम्रो गाइड प्रदान गर्दछ!